मजदुरी गरेर हुर्काएको छोरो त,स्करले मारेपछि रोकिएन आमाको आँसु – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मजदुरी गरेर हुर्काएको छोरो त,स्करले मारेपछि रोकिएन आमाको आँसु
भदौ पहिलो साता धनगढी उपमहानगरपालिका—१२ जुगेडा स्थित प्रहरी चौकीको ईञ्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालेका गोविन्द कार्तिक १ गते राति गस्तीको क्रममा निस्किएका बेला तस्करहरुको एम्बुसमा परे । उनको बिभत्स ढंगले तस्करहरुले हत्या गरे । यो घट्ना गोविन्द बिकको मात्र हत्या थिएन । आमा कलावतीको एउटा सपनाको पनि हत्या थियो । र उनीसंगै आश्रित श्रीमती, सात र तीन वर्षीया छोरी, दाई, भाउजु, उनीहरुका तीन सन्तान, भाई र बुहारी समेत गरी परिवारका ११ जना सदस्यको आशा र भरोसाको पनि हत्या थियो । गोविन्द राति गस्तीबाट हराएको खवर सुनेपछि अत्तालिएका उनकी आमा र श्रीमती उनको लाश भेटिएयता होसमा छैनन । परिवारका सदस्यहरु आफै विक्षिप्त झै छन् ।
आमा र उनकी श्रीमतीलाई कसरी सम्हाल्ने ? गोविन्दका मामा भरमल सुनाउदै थिए, हाम्रो त सपना र आशा भरोसा उही भाञ्जा थियो । उही तस्करहरुको निशानामा प¥यो । परिवारका सदस्यहरुलाई त यो खवरमाथि नै विश्वास लागिरहेको छैन । यो खवर झुटा भईदियो हुन्थ्यो, मामा सुनाउदै थिए, नाबालक भाञ्जालाई मजदुरी गरेर हुर्काएकी दिदी र बुहारीलाई कसरी सम्झाउनु ? भाञ्जा गोविन्द सिंगो दलित समुदायको एक्लो असई थियो । उसैलाई तस्करले मारिदिए । गोविन्दले धनगढीमा डेरा लिई छोराछोरीलाई पढाईरहेका थिए । उनको हत्यापछि उनका छोराछोरी र श्रीमतीको त बिचल्ली भएको छ नै, उनको पुरै परिवार नै आर्थिक संकटसंगै नमेट्नि पीडा भोग्न बाध्य भएको छ ।